RW Khayre,”Beesha Caalamku Waxay U Soo Jeensatey Soomaaliya” – Radio Daljir
Juunyo 30, 2017 6:06 b 1
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay wadamada Caalamka in ay u soo jeesteen wax u qabashada Soomaaliya, loona baahan yahay shacabka Soomaaliyeed arrintaasi in ay taageeraan.
Xasan Cali khayre ayaa tilmaamay in Soomaaliya mudo badan in ay ku soo jirtay dhibaato iyo Dagaalo, wixii hada ka dambeeyana loo baahan yahay sidii looga wada shaqeyn lahaa sidii horey ay ugu sii socon laheyd.
Dhanka kalena, ra’iisul wasaare Khayre ayaa sheegay shacabka Soomaaliyeed in laga doonayo in ay u istaagaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka, maadaama Beesha Caalamka ay taageero dhan walba ah Soomaaliya la garab taagan tahay.
“Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa aduunyadu way u soo jeedaa Soomaaliya, Aduunyadu waxay diyaar u tahay in ay wax nala qabato oo ay nala shaqeysato, dadka Soomaaliyeed waxaana ka codsanayaa in ay u istaagaan sidii dalka dib loogu dhisi lahaa” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Khayre wuxuu kaloo sheegay isaga, Madaxweynaha iyo xubnaha kale ee Dowladda in ay u istaageen sidii Soomaaliya ay horey ugu sii socon laheyd, si loo gaaro hormaro balaaran.
Hadalkan ayuu Ra’iisul Wasaare Khayre sheegay xilli uu shalay la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibaddda dalka Norway, kaasi oo booqasho ku yimid Muqdisho.
arintaa uu khayre ka dhawaajiyey waa mid dan u ah dadka soomaaliyeed inay taageeran